महँगा फोनमा पनि किन टिक्दैन ब्याट्री ?
स्मार्ट फोनको विकासक्रम द्रुतगतिमा बढिरहेको छ । नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजीसँगै फोनहरु विकसित हुँदै गएका छन्, सुविधाहरु बढिरहेका छन् । तर, वर्षौंदेखि स्मार्टफोनमा खासै सुधार हुन नसकिरहेको एउटै समस्या छ, ब्याट्री लाइफ । महँगा र आधुनिक प्रविधिका स्मार्ट फोनमा पनि ब्याट्री धेरै नटिक्ने समस्या यथावत् छ ।
बरु एक–दुई हजारका साधारण फोन सेटमा एकपटक फुल चार्ज गरेपछि चार–पाँच दिनसम्म ब्याट्री टिक्छ । तर, लाखौँका स्मार्टफोनका ब्याट्रीले मुस्किलले एक वा दुई दिन धान्दछन् । यसको कारण के त ? स्मार्ट टेक्नोलोजीको विकास यति अघि बढिसक्दा ब्याट्री लाइफमा भने किन सुधार भइरहेको छैन ? फोनको तुलनामा ब्याट्रीको टेक्नोलोजी किन विकसित हुन सकिरहेको छैन ?
ब्याट्री टेक्नोलोजीमा सुधारका सामान्य प्रयासबाहेक दशकौँदेखि नयाँ टेक्नोलोजीको विकास हुन सकिरहेको छैन । आज पनि स्मार्ट फोन ब्याट्रीमा लिथियम कोबाल्टको प्रयोग हुन्छ, जुन १९९० (इस्वी सम्बत) को दशकदेखि चलिरहेको छ । यस्तोमा भविष्यमा यदि कुनै नयाँ टेक्नोलोजीको विकास भयो भने ब्याट्री लाइफको समस्या समाधानको सुरुवात नयाँ शिराबाट हुनेछ ।